China Self nanamboatra orinasa labiera vaovao sy mpanamboatra | Hanketo
Ny labiera vita amin'ny tena ihany dia manondro ny labiera noforonin'ny tena miaraka amin'ny fitaovana labiera kely. Antsoina hoe labiera tena izy satria io no anaovan'ny tanana azy fa tsy avy amin'ny famokarana indostrialy lehibe. Ny famokarana azy dia samy hafa tanteraka amin'ny novokarin'ny mpamaky labiera lehibe sasany. Any Alemana, ny lalàna momba ny fahadiovana labiera dia namaritra mazava tsara ireo akora ampiasaina amin'ny fanamboarana labiera Mety ho:
Ny faritra labiera tena vita labiera dia karazana labiera avo lenta, izay amidy matetika any amin'ny hotely kintana avo lenta.
Miaraka amin'ny fitaovantsika labiera, tompon'andraikitra amin'ny fanomezana fanohanana ara-teknika anao izahay, ary koa ny akora ilaina sasany amin'ny fizotran'ny labiera (mazava ho azy, azonao atao ihany koa ny mividy ny akora).
Ny fizotran'ny fermentation dia ny fijanonan'ny maripana ambany indrindra. Ny fe-potoam-piasan'ny fermentation dia manodidina ny 10 andro -21 andro, ny fe-potoana fanamasinana labiera alemana sasany dia 28 andro, ka ny fanamasinana tsikelikely ny labiera amin'ny toetr'andro ambany, malefaka kokoa ny tsiro, mateza kokoa ny fofona, manankarena kokoa ny foam.
Ny labiera vita labiera an-trano dia karazana labiera avo lenta, izay amidy matetika any amin'ny hotely kintana ambony.
Fangaro misy labiera vaovao vita amin'ny labiera
Ireo rafitra fanamboarana labiera any Alemanina dia ahitana ireto manaraka ireto:
1. Rafitra fanorotoroana malt
2. Rafitra fanamasinana, fandrahoana ary fanivanana
3. Rafitra fanamasinana
4. Rafitra fanaraha-maso ny mari-pana
5. Rafitra fampangatsiahana
6. CIP amin'ny rafitra fanadiovana mandeha ho azy
Fitaovana labiera tena vita amin'ny alemanina vita amin'ny varahina sy vy vy. Ny varahina mena amin'ny vilany saccharification dia fahagola sy kanto. Ny fitaovana dia mampiasa maody fanafanana herinaratra, izay mora ampiasaina, tsy misy tabataba ary tsy misy loto. Ny orinasanay koa dia afaka manamboatra fitaovana labiera arakaraka ny toe-javatra misy ny trano fandraisam-bahiny tsirairay, ka ny fitaovana labiera dia lasa fitaovana entina hanatsarana ny naoty hotely. Ity karazana fanaovana divay eo an-toerana sy fisotroana fisotroana divay sy trano fisakafoanana ity dia nanjary niseho tamin'ny fiainana an-tanàn-dehibe.
Ny fananana trano labiera ao amin'ny hotely dia mitovy amin'ny fananganana labiera. Tsy afaka mamokatra labiera mangatsiaka fotsiny izy amin'ny fahavaratra sy labiera mafana amin'ny ririnina, fa manome labiera vaovao ihany koa amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana miaraka amin'ny tsiro sy sakafo mahavelona ho an'ny mpanjifa samihafa, toy ny labiera mavo, labiera mainty, labiera mena, labiera spirulina ary voankazo isan-karazany tsiro labiera vaovao ho an'ny vehivavy. Tsy afaka mamokatra labiera eny an-toerana ihany izy io, fa mampahatsapa ny mpanjifa ihany koa ny firavaka tsy manam-paharoa amin'ny famokarana labiera avo lenta sady mankafy ny fanjifana avo lenta.
Ny andiana labiera namboarin'ireo fitaovana labiera alemana - labiera, labiera, labiera spirulina, labiera voan-balsama ary divay mamy - no lasa ankafizin'ny tsenan'ny fihinanana labiera. Ny akora misy labiera vita amin'ny tena dia ny malt aostralianina, hop top Czech ary ny masirasira vaovao alemana, tsy ampiana fitaovana fanampiny, toy ny vary, ary mifantoka amin'ny fanamafisana ny fikarakarana ara-pahasalamana ny vary orza Afaka mampihena ny lipidan'ny rà, manalefaka ny lalan-drà, manatsara fiasan'ny fo, fisorohana homamiadana ary fisorohana ny hatavezina aorian'ny fisotroana.
Previous: Fitaovana yaorta kely
Manaraka: Fitaovana trondro am-bifotsy